Raisel Wasaaraha Britain oo khudbad dheer kaga hadlay Waqtiga la qaadayo Xayiraadaha Saaran Dalka
HomeWararka Maanta SomaliskaRaisel Wasaaraha Britain oo khudbad dheer kaga hadlay Waqtiga la qaadayo Xayiraadaha Saaran Dalka
November 24, 2020 Wararka Maanta Somaliska 0
Dukaamada, timajarayaasha iyo goobaha jimicsiga ee UK oo dhan ayaa ka mid ah waxyaabaha laga yaabo inay dib u furmaan marka xiritaanka hadda uu ku egyahay 2 Diseembar la gaaro. Laakiin meelaha kale waxaa jiri doona tallaabooyin adag .
Tani waa waxa uu yiri Raiisel Wasaaraha Britain , Boris Johnson oo khudbad ka jeediyay aqalka baarlamaanka ee London .
Wuxuu sidoo kale beddeli doonaa sharci aad loo dhaleeceeyay oo ku saabsan makhaayadaha Ingiriisiga ee aan loo oggolaan inay bixiyaan cunno iyo cabitaan tan iyo markii uu xirmay dhaqan galay tan iyo 6 Nofembar.
– Waxaan rabnaa inaan u beddelno adeegii ugu dambeeyay ee 22 iyo waqtiga xiritaanka 23, ayuu yidhi.
Si kastaba ha noqotee, tani ma khuseyso meelaha ugu xun ee uu sameeyay xanuunka, waxa loogu yeero heerka saddexaad. Halka, baararka iyo makhaayadaha waxaa loo oggol yahay oo keliya inay iibiyaan meelaha laga qaato. Isla mar ahaantaana, heerka cagaarka waxaa la siin doonaa ilaa 4,000 oo daawadayaal ah dhacdooyinka isboorti ee banaanka ka dhaca England laga bilaabo 3da Diseembar.
Johnson wuxuu sheegay inuu soo dhaweynayo horumarka dhawaanahan laga sameeyay talaalada loona adeegsan karo mustaqbalka dhow.
Dowlada ayaa la filayaa in ay qaado xayiraadaha saaran wadanka gudihiisa ee sameynta xoogan dhaliyay tan iyo markii xanuunka corona ee wadanka dib ugu soo laabtay,